Oslo: Meelaha khamriga lagu cabo oo la mamnuucay. - NorSom News
Oslo: Meelaha khamriga lagu cabo oo la mamnuucay.
Golaha deegaanka Oslo ayaa galabta mamnuucay dhamaan goobaha lagu cabo khamriga, kadib markii ay sheegeen inay u hogaansami waayeen amarada looga hortagayo xanuunka Corona-virus.
Reymond Johnson, gudoomiyaha maamulka Oslo ayaa sheegay in xiligan adag ay muhiim tahay in la sameeyo wax walba oo looga hortagi karo faafitaanka Corona-virus.
Isbuucii hore ayaa goobaha lagu cabo khamriga lagu wargaliyay inay dadka goobahaas joogo ay isku jirsadaan hal mitir ugu yaraan, balse booliska oo kontroll ku sameeyay ayaa sheegay inay adagtahay fulinta amarkaas.
Sidaas darteed ayay Oslo kommune sheegeen inay hada guud ahaanba mamnuuceen ku cabista khamriga goobaha banaanka ah, balse goobaha khamriga lagu cabo ayaa wali iibin kara cuntooyinka.
Mamnuucistan ayaa ka bilaaban doonto caawa fiidkii, marka ay saacadu tahay 20:30.
Xigasho/kilde: Oslo forbyr skjenking av alkohol
Previous articleNorway oo diyaarad u kireysay dadkii wadooyinka ka tuugsan jiray.
Next articleEreteriya: Norway ayuu nooga yimid qofkii ugu horeeyay ee Corona-virus laga helay.